Android လုလင်: November 2013
ကျနော်ဖုန်းက samsung galaxy s advance gt-i9070 ပါ ဖုန်တစ်လုံးလုံးကို မြန်မာလိုပြောင်ချင်တယ် သိရင် ကူညီးပေးပါလာ ကျေးဇူးတင်ပါ့မယ် ဒီလိပ်စာကို ပြန်ဆပ်သွယ်ပေးပါ ရ မရရပေါ့ please
ကျနော့် မေးလ်ဆီကို ရောက်လာတဲ့ babyboylay35@gmail.com အမေးလေးကိုဖြေဖို့လိုက်ရှာလိုက်တော့
မူလရေးသားသူတွေကို credit ပေးထားပါတယ်။ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြန်မေးလာရင် လုလင်ပျို မဖြေတတ်ပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ဗားရှင်းအနိမ့်ဖုန်းပဲ သုံးနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်မစမ်းရသေးပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 7:47 PM 13 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ကိုကို ပုန်း မမပုန်း တွေအတွက် viber မှာ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး လုပ်ဖို့ ဆော့ဝဲလာပြီ
Android ဖုန်းလေးပေါ်မှာ ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်လေးများ လိုချင်တဲ့ဗွီဒီယိုလေးတွေကို Rain tone လေးလုပ်ပြီး
ထားချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဆော့ဝဲနှစ်ခုတင်ပေးလိုက်တယ်နော် စမ်းသပ်ကလိကြည့်လိုက်
အုန်း mp3 လည်းပြောင်းလို့ရတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM 24 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android Phone မှာ USB Debugging ကို Enable လုပ်နည်းများ
တကယ်တော့ ဒီပို့စ်က ရေးဖို့တောင်မလိုဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်မှာပါ.. ဘာကြောင့် USB Debugging ကို Enable လုပ်ရတာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မေးကြလွန်းလို့ပါ.. ဒီပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာတွေဟာ သီးခြားစီ ရေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်..
ဖုန်းမှာ USB Debugging ကို Enable လုပ်တယ်ဆိုတာ ဖုန်းရဲ့ System နဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ System နဲ့ အချိတ်အဆက်ရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်.. ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာမှာ USB ကြိုးကတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပေမယ့် ကွန်ပျူတာက ဖုန်းကို ဝင်ရောက်ပြီး ဖုန်းရဲ့ System ကို ချိတ်ဆက်လို့မရသေးပါဘူး.. USB Debugging ကို Enable လုပ်ပြီးမှသာ ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ဒါတောင်မှ ကွန်ပျူတာမှာ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Driver ကို မှန်ကန်အောင်သွင်းထားပြီးမှရမှာဖြစ်ပါတယ်..
Viber Lock လော့ချပြီး သူများချက်လို့မရအောင် ပိတ်ထားလို့ရတဲ့ နောက်ထက်လော့ချ ဆော့ဝဲလေးပါ ပုံစံဒဇိုင်းလေးကအရန်းလှတယ် သုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မြန်မာစာ မှန်စေတဲ့ FEPFZ ဗားရှင်း 2.1 ထွက်လာပါပြီ.
မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ.. Android မှာ ခုတလော မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ အများကြီးကြုံတွေ့နေရပြီး အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ Developer တွေကလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးပမ်းနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်.. ခု မြန်မာစာထည့်တာမှာ အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ အဆင်အပြေဆုံးလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ apk တစ်ခု ခေတ်စားနေပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 11:22 AM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
Google service မရသော ဖုန်းများကို google service ထည့်သွင်းပေးမယ့် 4.2.1 MMSD Gapp Installer (Beta)
MMSD ရဲ့ Gapp Installer ကို Android Version 4.2 ကနေ 4.2.2 ထိ Gtalk, Gmail, Playstore သွင်းနိုင်အောင် တင်ပေးထားတာတွေ့လို့ ပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
ရေးတဲ့အချိန် 11:16 AM 11 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဖုန်း Missed Call ခေါ်တဲ့အခါမျိုးမှာ အချက်ပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ နာရီအလန်းပေးတဲ့အသံလေးနဲ့ အော်နေပါလိမ့်မယ် အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်
android လုလင် မှာ မေးမြန်းဆွေးနွေးတောင်းဆိုနိုင်ရန်နေရာမှာ တောင်းဆိုထားတာလေးပါ။
NayTar November 25, 2013 at 5:45 PM
မင်္ဂလာပါ ရှည်၂ ဝေး၂ ပြောမနေတော့ပါဘူး လေးစားပါတယ် .။ ကျွန်တော် လိုချင်တာ တစ်ခု ရှိပါတယ် .။ Google မှာ ကလိလို့ မရလို့ပါ.။ skype version ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခု တစ်ကယ်လိုအပ်နေပါတယ်.။ နည်းပညာဆိုဒ်တွေ တော်တော်များများရှိပေမယ့်တစ်ကယ် ကူညီ နိုင်တာ အစ်ကို ဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်.။ ကျေးဇူးနော် အစ်ကို .။ ဟာဝေး ၀ိုင် ၃၀၀ ပါ .။
ရေးတဲ့အချိန် 7:44 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ GSM/WCDMA ဖုန်းတွေရဲ့ Internet Setting များကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ အင်တာနက် setting များကို auto ဖြည့်ပေးမယ့် MPT Net Setting ဆော့ဝဲလေးကိုရေးသားလိုက်ပါတယ်။ Android ဖုန်းတွေအတွက်ပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 6:16 PM7comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
KitKat Launcher v1.3.7 Unlocked Prime Android 15MB
Launcher အလန်းလေးပါ ကြိုက်ရင်တော့ အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
မနေ့က floatting tource ဆော့ဝဲလေး တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုနည်းတူ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဟာလေး အသစ်တွေ့လို့ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ရေးတဲ့အချိန် 12:11 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
easy touch ဆိုတဲ့ widget ဆော့ဝဲကို သုံးဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ခုကောင်လေးက အဲဒါထက်လန်းတာမို့ သုံးချင်သူတွေအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အောက်မှာ ပုံကြည့်ပြီး တကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုမှ ယူပါနော် :)
ကိုယ်ရေးတဲ့စာတွေကိုအသံထွက်ဖတ်ပေးမယ့် speak correctly
အခုတော့ ဖုန်းမှာလည်း သုံးလို့ရနေပါပြီ။
ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေကို အသံထွက်ဖတ်ပြမှာမို့ english speaking တက်နေသူတွေ ၊လေ့လာနေသူတွေအတွက် အသုံးဝင်မှာပါ။
ပုံလေးတွေကြည့် ခိုက်ရင် သဘောရှိ ကရောဟိ ဆွဲစေ
Huawei ဖုန်းတွေကို Firmware တင်နည်း
ဒါကတော့ Firmware ပျက်နေတဲ့ဖုန်းတွေမှာ
SD card Slot ပျက်နေရင် firmware
ဒါကြောင့် Tool နဲ့တင်နည်းလေး
ရေးတဲ့အချိန် 8:04 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
ကဲ ထွေထွေထူးထူး ပြောမနေတော့ဘူးဗျာ။
အောက်မှာပုံတွေကြည့်ပြီး အသုံးလိုရင် ယူစေဗျာ။
ထွက်တာတော့ တော်တော်ကြာပါပြီ တင်မယ်တင်မယ်နဲ့မတင်ဖြစ် ဖြစ်နေတာ။
လုလင်ပျို လည်း update လုပ်ဖို့ ကွန်မရှိသေးလို့ပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 6:30 AM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
ရေးတဲ့အချိန် 12:37 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ကိုယ့်အချစ်ဆုံးလေးနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာ ဘယ်နှရက်ရှိပြီလဲ Auto တွက်ချက်ပေးမယ့် App
ကိုယ့်အချစ်ဆုံးလေးနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာ ဘယ်နှရက်ရှိပြီလဲ Auto တွက်ချက်ပေးမယ့် App လေးပါ။
ချစ်သူရည်းစားရှိသူများ တုံ့ဆိုင်းမနေပဲ ဆွဲထားလိုက်ပါဗျာ။
အောက်မယ် လုလင် ချစ်သူ နဲ့ လုလင် ချစ်သူတွေဖြစ်တာဘယ်နှရက်ရှိပြီလဲဆိုတာလေးကို screenshop ရိုက်ပြထားပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 11:54 AM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဓါတ်ပုံကိုခဲခြစ်ပန်းချီ အဖြစ်ဖန်တီးပေးမယ့် - XnSketch Pro v1.19 APK
ဓါတ်ပုံတွေကို ခဲခြစ်ပန်းချီ ပြောင်းချင်သူများအတွက် XnSketch Pro v1.19 APK နောက်ဆုံးထွက် Version ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးနဲ့ ခဲခြစ်ပန်းချီ ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် အပြင်မှာဆွဲတဲ့ ခဲခြစ်ပန်းချီ အတိုင်းကို တော်တော်လေးကိုတူပါတယ်ဗျာ။ အဖြူအမည်းနဲ့ ခဲခြစ်ပန်းချီ ဖန်တီးနိုင်သလိုဘဲ ၊ မိမိနှစ်သက် တဲ့အရောင်နဲ့ ခဲခြစ်ပန်းချီ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ ဖန်တီးမှု
Android မှာTask Killer တွေမသုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
Android Phone တွေမှာ Task Killer App မရှိတဲ့ဖုန်းဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါးတာသေချာပါတယ်။Task Killer တွေက Background မှာ Run နေတဲ့ App တွေကို ပိတ်ခြင်းအားဖြင့် ဖုန်းရဲ့Performance နဲ့Battery Life ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ် လို့ အများစုကထင်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ Task Killer တွေဟာဖုန်းရဲ့ Performance နဲ့ Battery Life ကိုကျဆင်းစေပါတယ်။ဒီလိုပြောရင်ယုံကြည်မယ့်သူမရှိဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။ Task Killer တွေမသုံးသင့်တဲ့အကြောင်းကို နိုင်ငံခြားနည်းပညာ ဆိုက်တွေမှာတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရေးသားနေကြလို့ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Feature အသစ်တွေထပ်တိုးလာတဲ့ - Viber v4.0.0.1707 APK (Latest Version)
Viber ဆိုရင် တော့လူတိုင်းသိကြမှာပါ အခုလည်း မနေ့ 12ရက်နေ့က Version အသစ်လေးထွက်လာလို့ ဒီနေ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ မနေ့ကချက်ခြင်းတင်ပေးမလို့ပါဘဲ။ Upload တင်နေတာနဲ့ ကွန်နရှင်မက လည်းသိပ်မကောင်းတော့ ဒီနေ့မှဘဲတင်ပေးဖြစ်သွားတာပါ။ အခု အသစ်ထွက်လာတဲ့ Version မှာတော့ Sticker တွေအများကြီးထပ်တိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အချို့ Sticker များကိုလည်း ၀ယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် Sticker Mark လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Android OS 4.1 နှင့်အထက် User တွေအတွက် အသံကို Record လုပ်ပြီး Message ပို့လို့ရပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီထပ်တိုးလာတဲ့ Feature တွေကတော့ User တွေအတွက် တကယ့်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ အသစ်ထပ်တိုးလာတဲ့ Sticker များကိုလည်း အောက်မှာပုံနဲ့တကွပြပေးထား ပါတယ်ဗျာ။
Password/Pin/Pattern Lock ကိုကလစ်တစ်ချက်နဲ့ဖြုတ်ပေးမယ့် Vroot ရဲ့ Rommaster.exe
V Root ဆိုဒ်မှာပဲရှိနေတာပါ။ Password lock / Pin Lock / Pattern Lock စတာတွေကို ကလစ်တစ်ချက်နဲ့ဖြုတ်ပေးမယ့် Vroot ရဲ့ Rommaster.exe ပါ။ ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် တိုက်ရိုက်လင့် တင်ထားပါတယ်။ Click လုပ်ရမယ့်နေရာက Downward Arrow ပုံနဲ့ တရုတ်စာလေးလုံးလောက်ပါတဲ့ Button လေးပါ။(13.97 MB V 3.3.2 2013.11.01 ဆိုတဲ့စာတန်းအောက်မှာပါ။) အဆင်ပြေပါစေ....
ရေးတဲ့အချိန် 4:45 PM 11 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Jelly Bean v4.1.2 တွေမြန်မာစာ100% မှန်ပြီ Android ဖုန်းတစ်လုံးကို မြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်ခြင်း
ရေးတဲ့အချိန် 6:30 AM 10 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် အခြေခံလျို့ဝှက်ချက်ငါးခုထဲက တစ်ခု ဘာလို့မရတာလဲ ???
ဖုန်းများအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်ငါးခု ဆိုတာကို ၀ါသနာရှင်လေ့လာနေသူများ သိပြီးလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။
အဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ငါးခုထဲကမှ ဖုန်းဘတ္ထရီ အပိုကိစ္စက အဆင်မပြေကြဘူးဆိုလို့
ခု မေးထားတာကို ပြန်ဖြေထားတာလေးတွေ့လို့ အားလုံးသိစေရန် ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
အကြောင်းအရာ android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ
စက်ရုပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်သစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့Android 4.4 Kitkat ပုံစံနဲ့ Theme လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 4.4 စတိုင်လေးဆိုတော့ တမျိုးတော့ ဆန်းနေပါတယ်။ နမူနာအနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ဖို့ အတွက် အောက်မှာ Screen Shoot လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခု Theme လေးကို Nova Launcher. , Apex Launcher. , Go Launcher. , Holo Launcher. , ADW Launcher. , Action Launcher Pro. , Solo Launcher. , စတဲ့ Launcher တွေနဲ့ အခြားသော Launcher များမှာ အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android 4.4 Kitkat Theme ကို သုံး မယ်ဆိုရင်တော့ Android OS 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
ရေးတဲ့အချိန် 11:10 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ရေးတဲ့အချိန် 10:59 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
X Video Editor နဲ့ ကာရာအိုကေစာတန်းထိုးတာအရမ်းလွယ်တာမို့ အချိန်လည်း သိပ်မရတာကြောင့် စာတန်းထုးနည်းလေး မတင်တော့ဘူးနော်။ ဆော့ဝဲလ်လောက်ပဲ တင်ပေးလိုက်တော့မယ်။ Andriod Version 2.2 အထက်တွေမှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
icon ဒီဇိုင်းပြောင်းသွားတဲ့ root explorer နောက်ဆုံး update
Android လုလင် ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး မင်္ဂလာပါ။
ဒီတစ်ခါတင်ပေးမဲ့ဆော့ဝဲလေးကတော့ root explorer ပဲဖြစ်ပါတယ်။
root explorer ဆိုတာဘာကြီးလဲ လို့မေးကြအုံးမှာလား
လုလင်ပျို လိုပဲဖုန်းတစ်လုံးလုံးကိုဗြောင်းဆန်အောင်ကလိတတ်ကြတဲ့ သယ်ရင်းတွေတော့ root explorer ဟာ ဘာကြီးဆိုတာ သိလောက်ရောပေါ့နော်
ရေးတဲ့အချိန် 6:30 AM6comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ဖုန်းမှာ contactsတွေက ဘာတွေလည်း ၊ကိုယ့်ချစ်သူလေး ကို ဘယ်သူတွေ ကျူနေကြလည်း သိချင်ရင် သူ့ဖုန်းလေး ကို လျို့ဝှက် apk
လေး ထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူ ဘာလုပ်လုပ်သိနေတော့မှာပေါ့ ဟဲဟဲ။ကိုယ့်ချစ်သူက တစ်စုံတစ်ယောက် ကို မက်ဆေ့ပို့လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကို အကြောင်းကြား
လိမ့်မယ် ဘာစာတွေပို့တယ် နံပါတ်ဘယ်လောက်က ဘယ်အချိန်မှာ ပေါ့။
ရေးတဲ့အချိန် 6:30 AM 11 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Samsung phone & Huawei phone အ၀ယ်မမှားရအောင် အတုအစစ်ခွဲခြားနည်း အပြည့်အစုံ
ဒီနေ့တော့ Android လုလင် ပရိသတ်များကို ဖုန်းဝယ်တဲ့အခါ clone မထိအောင်
အတုအစစ်ခွဲခြားနည်းကိုအပြည့်အစုံရေးထားတာမို့ android ဖုန်းကိုင်သူတိုင်း ဆောင်ထားရမဲ့
ရေးတဲ့အချိန် 9:08 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
TTPod Apk v6.3.0 English Version For Android (8 MB)
TTpod ဆိုရင်လူတိုင်းနီးပါးသိမှာပါ။မသိတဲ့သူတွေလည်းရှိချင်ရှိဦးမှာပါ။အခု update လေးတွေ့ လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုဒီဗားရှင်းကတော်တော်
လေးလန်းလာတယ်။TTpod ဆိုတာ Songs(English,Chinese,Korea....except Myanmar Songs)တွေကိုစာသားလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးတဲ့ကောင်လေးပါ။အွန်လိုင်းကနေသီချင်းတွေကိုဒေါင်းစရာမလိုပါဘူး၊
မိမိစက်ထဲမှာရှိတဲ့သီချင်းတွေကိုစာသားတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးတာပါ။Song Cover တွေကိုလဲဖော်ပြပေးပါတယ်။ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့Original Music Player ထက်အရမ်းလန်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုဒီကောင်လေးနဲ့ ပဲသုံးတာများတယ်။ကျွန်တော်ကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းက ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ ရတဲ့ Sound effect ကြောင့်ပဲ။ကိုယ်စွမ်းရင်စွမ်းသလို Sound တွေကလန်းမှာပါ။စာသားတွေကိုလိုချင်ရင် အွန်းလိုင်းကနေခဏလောက် Check လုပ်ပြီးမှရမှာပါ။
ဖုန်းပေါ်မှာပဲ hackမှာနော့ (tablet ပါပါတယ်)
ရေးတဲ့အချိန် 6:30 AM 18 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ရေးတဲ့အချိန် 6:30 AM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဓာတ်ပုံနဲ့သီချင်းနဲ့တွဲပြီး Slide Show လုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ
ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ Slide Show တွေကို Youtube ပေါ် face book ပေါ်ကိုလည်း
Putet Journal (Android ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာ ကာတွန်း ဖတ်ကြမယ်)
Cbox မှာ သူငယ်ချင်းတယောက်တောင်းထားလို့ Putet Journal လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ ကာတွန်း ဖတ်တာ ၀ါဒနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း အလွယ်ဒေါင်းနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Andriod ဖုန်းတလုံး ရှိရုံဖြင့် ကာတွန်း စာအုပ်တွေကို ဖတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Playstore မှာလည်း ၀င်ရောက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
Android ဖုန်းပေါ်မှာဂီတကိုဖန်တီးလို့ရတဲ့ RD4 - Groovebox v2.1.1 ( for Android )
ပီမိုးနင်းရေးတဲ့ မိန်းမစိတ်ကျမ်း ကာမသိဒ္ဒိကျမ်းလိုပဲ အသုံးတည့်မယ့်ဆော့ဝဲကောင်း
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ 18 နှစ်အထက် အပျိူ လူပျိူ အိမ်ထောင်ရှင်တွေအတွက်
ငယ်ငယ်က ပီမိုးနင်း စာအုပ်တွေဖတ်ဖူးရင် ဒါက ဆောင်သင့်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ
ရေးတဲ့အချိန် 8:25 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Facebook Desktop ဆိုတဲ့ Application လေးကတော့ တော်တော်လေးကို မိုက်တယ် ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း 1Mobile မှာ မွှေ ရင်း မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့သွားပြီး သုံးကြည့်တာနဲ့ သဘောကျလို့ အခြားသော ဘော်ဒါများလည်း စမ်းပြီးသုံးနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကွန်ပြူတာမှာ သုံးနေရသလိုပုံစံ မျိုး မြင်ရ သုံးရမှာပါ။ Chat Box ကအစ PC ပုံစံမျိုးပါဘဲ။ ဒီကောင်လေးကိုသုံးဖို့အတွက် ကွန်နရှင်အများ ကြီးကောင်းဖို့မလိုပါဘူး။ New Status တွေတက်တာလည်းမြန်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Clone Camera အသုံးပြုတဲ့သူများအတွက်နောက်ဆုံးထွက်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီကောင်လေးကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက် ၀ါသနာပါတဲ့
အကို အမ ညီ ညီမ တွေ အတွက် အဆင်ပြေမယ် ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
သူက နောက်ခံ ရှုခင်း တစ်မျိုးထဲမှာ အိုင်တင်လေးမျိုးလုပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်
နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် နောက်ခံ ရှုခင်း တစ်မျိုးထဲမှာ အိုင်တင်လေးနဲ့
ဓာတ်ပုံခြောက်ခါရိုက် ပြီးရင် တစ်ပုံ မှာ အိုင်တင်ခြောက်မျိုး ပုံလေးနဲ့ ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
ဓာတ်ကာလာတွေလည်း ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လည်းပါပါတယ်
ဘယ်လိုလုပ်မလည်းဆိုတော့ Apk ကို Install လုပ်လိုက်ရင် ဗီဒီယို ရှင်းပြချက်တစ်ခါတည်းပါလာပါတယ်
မှာလေ့လာပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အောက်ကလိပ်စာရမှာရယူနိုင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 7:48 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Bagan Keyboard Pro ကို ခဏ ခဏ တောင်းနေ ပြောနေကြလို့ တဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် .....
ကျွန်တော်ဒီနေ့ တင်ပေးချင်တာကတော့ Bagan keyboard pro crack version လေးပဲဖြစ်ပါတယ် အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော် ဒီနေ.အထိ Frozen keyboard ပဲသုံးခဲ့တာကြောင့် ပုဂံအကြောင်းသိပ်မသိပါဘူး ဒီကောင်လေးကိုအခုမှစသုံးဖြစ်တာပါ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ အကိုတစ်ယောက်က လက်ဆောင်လာပေးထားတာပါ ဘယ်သူ Crack ထားလဲဆိုတာတော့မမေးလိုက်မိလို့ သက်ဆိုင်သူအား Credit ပေးပါတယ်ဗျာ ခွင့်လွှတ်ပါ..ကျွန်တော်တို့လဲကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲဝေမျှခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်....
မိတ်ဆွေတို့ရေအခုတင်မှာကတော့ Huawei C8813 ကို Downgrade ဆင်းနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်သိပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါဗျာ..
မိမိဖုန်းက Lucky Patcher က 3.6.3 ဗားရှင်းမဟုတ်ရင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် Update လေးပါ
ဒါကိုတော့ တော်တော်များများသိမှာ Android App တွေ ဂိမ်းတွေ လိုင်စင်တောင်းတဲ့အခါ
လိုင်စင်မတောင်းရအောင်လုပ်တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ ပြီးတော့ Free App တွေ ဂိမ်းတွေ ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပြီး အသုံးပြုတဲ့အခါ ကြော်ငြာတွေ တွေ့ဖူးမှာပါ ဖျက်လိုက်လည်း
App ဂိမ်း တွေကို ပြန်ဖွင့်ရင် ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာ ပြန်ပေါ်လာပါတယ် အဲဒါတွေကို ဖြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်